Tụgharịa TV ochie gị ka ọ bụrụ TV Smart na SPC ọhụụ | Akụkọ akụrụngwa
Gbanwee TV ochie gị ka ọ bụrụ Smart TV na SPC Alien ọhụrụ
Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ iji nwee ike kporie ọdịnaya ndị ọzọ na mgbasa ozi ahụ site na ọwa niile. Site na ọrụ vidio dị iche iche gụgharia, anyị nwere ọtụtụ ọnụọgụ usoro na ihe nkiri iji nwee ọ whenụ mgbe na otu anyị chọrọ.
Ọ bụrụ na anyị nwere TV mara mma, nke amara nke ọma dịka Smart TV, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọdịnaya a na TV anyị. Ma ọ bụrụ na telivishọn anyị emecha ochie, Atiya ebe igwe onyonyo igwe na-adighi adighi, ma enweghi oru nwere ọgụgụ isi, anyị nwere ike iji ngwaọrụ nke na-enye anyị ohere ịnweta ụdị ọdịnaya ahụ na anyị jikọọ ya na telivishọn.
Onye nrụpụta SPC na-enye anyị ngwaọrụ abụọ na-enye anyị ohere gbanwee HDMI TV anyị ka ọ mara TV ma si otú a nwee ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile dị na nkwanye, ma site na Netflix, HBO, Amazon Prime Video ma ọ bụ site na kọmputa anyị jikọtara na netwọk anyị.
2 SPC Ọbịa
SPC Alien Stick bụ obere ngwaọrụ nke jikọtara na HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri nke telivishọn anyị ma na-agbakwunye ọtụtụ ọrụ na ya, dịka Smart TVs nwere ugbu a, mana yana uru nke sistemụ arụmọrụ gam akporo nyere. N'ime Ali Stick anyị hụrụ a 4 GHz 1,5-core processor esonyere 1 GB nke RAM.
Ọnụ nke SPC Alien Stick bụ 59,99 euro.
Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ ka ukwuu, SPC na-enye anyị SPC Alien obere ngwaọrụ nke na-ejikọkwa na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI na nke anyị hụrụ A gam akporo 4.4 KitKat, 1 GB nke Ram na 8 GB nke nchekwa di n'ime, oghere anyị nwere ike ịgbasa ruo 32 GB. Obere ngwaọrụ a na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ihe nkiri ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla site na nkwanye na ogo zuru oke.
Ọnụ nke SPC Alien bụ euro 69,90.
Onye SPC Alien na SPC Alien Stick ha jikọọ site na Wifi na netwọk ụlọ anyị ma anyị nwere ike ijikwa ha site na ntanetị. Ma menu ndị nwere nhọrọ nhazi dị mfe, yabụ ọ ga-adị mkpa ịme ihe ọ bụla iji mee ka ha gbanwee ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Gbanwee TV ochie gị ka ọ bụrụ Smart TV na SPC Alien ọhụrụ
A ga-enye LG G7 ThinQ na Mee 2 na New York
Google gbanwere, ọzọ, nyocha ihe oyiyi, na-agbakwunye nkọwa